DEG DEG Imaaraat-ka oo diyaariyey Lacagtii Deni isku sharaxi lahaa Xilka Soomaaliya - Allbanaadir
Home Warka Maanta DEG DEG Imaaraat-ka oo diyaariyey Lacagtii Deni isku sharaxi lahaa Xilka Soomaaliya
DEG DEG Imaaraat-ka oo diyaariyey Lacagtii Deni isku sharaxi lahaa Xilka Soomaaliya
Waxaa maalinimadi talaadada magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gaaray Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam,(madoobe) sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan madaxtooyada Jubbaland oo kusugan Kismaayo.
Lama sheegin ujeedkiisa rasmiga ah uu utegay Nairobi hase ahaatee warar la helay ayaa sheegaya in ay jiraan kulamo siyaasadeed oo laga abaabulayo magaaladaasi.
Badweyn ayaa heshay xog ah in Siciid Deni uu maalin kadib kuwajahan yahay Nairobi isaguna islamarkaana labada Hogaamiye ay kawada xaajoon doonaan Doorashada golaha Shacbaka,Is taageerid cad iyo Beyco ay wada galaan.
Siciid Deni ayaa wafdi hordhac u ah socdaalkiisa Nairobi la sheegay inay shalay gaareen halkaasi isaguna sabtida ama jimcaha berri midkood uu dhoofi doono madaxweynaha Puntland.
U jeedada socdaalka madaxda labada maamul ayaa ah saddex qodob sida ay xogaha hoose sheegayaan kuwaas oo kala ah:
In Deni uu si rasmi ah bilaabo ololihiisa doorashada, wuxuna dhisayaa qeybta ololihiisa ka shaqeyn doonta. Sida ilo muhiim ah inoo sheegena waxa ololahaas hormuud u ah Xildhiban Maxamed Jaamac Mursal oo ku magac dheer Geele iyo Senator Cabdullahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag).
Siciid Deni aya doonayo 35-ka kursi ee taallo Kismaayo inuu gudbiyo liis Xildhibaano uu isaga wato, kuna kalsoon yahay inay u codeyn doonan xilli Axmed Madoobe la sheegay inuu Deni u ogol yahay inuu usoo saaro 15 Xildhibaan , halka kuwa kale uu isaga keeni doono balse codkooda uu u jiheyn doono dhanka Deni, waa hadi aysan ballanta ka bixin.
Waxa magaalada Nairobi ku sugan Safiirka Imaaradka Carabta u fadhiyo Soomaliya Danjire Maxamed Axmed Alcuthman., waxeyna Deni iyo Madoobe doonayan in lagu wareejiyo dhaqaalihi lagu soo saari lahaa Xildhibaanada Gollaha Shacabka baarlamaanka 11aad ee Jubbaland & Puntland ka imaanaya.
Sikastaba waxaa macquul ah in wax isbadeli karaan oo xogahaan ay yihiin kuwo si qarsoodi ah ku helnay iyadoo madaxweynaha Puntland siciid cabdullaahi Deni uu ugu dambeyn isku sharaxi doono madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya 2021-ka.